बलिउड अभिनेत्री मालाको बाथरुममा छिर्दा भ्याट कम्पनीका अधिकारी अचम्मित ! - Naya Pusta
बलिउड अभिनेत्री मालाको बाथरुममा छिर्दा भ्याट कम्पनीका अधिकारी अचम्मित !
Naya Pusta २०७४ कार्तिक २५ November 11, 2017 गते प्रकाशित
एजेन्सी । कुनै समय चर्चित बलिउड अभिनेत्री माला सिन्हाले आज ८१ औँ जन्मदिन मनाउँदै छिन्। कयौँ चलचित्रमा काम गरिसकेकी मालाको जन्म १९३६ नोभेम्बर ११ मा कोलकतामा भएको थियो। पैसाका लागि एकदमै लोभ गर्ने उनको बानी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
उनको घरमा एक पटक भ्याट कम्पनीका अधिकारी छापा मार्न आएका थिए। छापा मार्ने क्रममा उनीहरु मालाको बाथरुममा समेत पुगे । बाथरुममा पुगेका भ्याट कम्पनीका अधिकारी निकै चकित परे। त्यहाँ लुकाएर राखिएको १२ लाख रुपैयाँ ती अधिकारीले फेला पारेका थिए।
ती पैसा बचाउनका लागि मालाले चालेको कदमले झन सबैलाई अचम्मित बनाउछ। उनले पैसा बचाउनका उक्त पैसा शारिरीक सम्बन्ध राखेर कमाएको बन्ने स्रोत उल्लेख गरेकी थिइन्। तर उनले विभिन्न चलचित्रमा काम गरेर उक्त पैसा कमाएकी थिइन्। उनले उक्त कदम वकिलको सल्लाहमा चालेकी थिइन्।
विभिन्न प्रयासपछि पनि उक्त पैसा फिर्ता नआउने देखिएपछि एक वकिलले अदालतमा शारिरीक सम्बन्ध राखेर कमाएको भन्ने उक्त पैसाको स्रोत खुलाएपछि पैसा फिर्ता पाउने सल्लाह दिएका थिए। उक्त सल्लाहपनि उनले अदालतमा उक्त लिखितरुपमा उक्त बयान दिइन्। त्यसपछि अदालतले उनलाई उक्त पैसा फिर्ता गरेको थियो।
मण्डला थिएटरमा गुज्जिए गजलकार क्याप्टेन सुवास राई
शिव श्रेष्ठको फिल्ममा करिश्माकी छोरी
यस्तोसम्म हुन्छ रंगीन दुनियाका मोडलको वास्तविक जीवन ​​​​​​​